I-KENTUCKY AG IZAKUFUMANA INGXELO YE-FBI YE-BALLISTICS KWIMEKO KA-BREONNA TAYLOR PHAKATHI KOPHANDO - IINDABA
I-Kentucky AG izakufumana ingxelo ye-FBI ye-ballistics kwimeko ka-Breonna Taylor phakathi kophando
Igqwetha laseKentucky lihlala lisungula ngeCawe ukuba iofisi yakhe ngoku ifumene ingxelo ye-FBI ye-ballistics yokubanjwa kukaBreonna Taylor.
Igqwetha ngalinye eliqhelekileyo uDaniel Cameron kunye negqwetha uBenjamin Crump - abamele usapho lakwaTaylor, kunye nemizi ka-Ahmaud Arbery, uGeorge Floyd noJacob Blake kumacala ahlukeneyo-bavele kwinkqubo ye-CBS Jongana neSizwe ngeCawa kusasa. UCameron ukhokele uphando ekubanjweni kukaBreonna Taylor, owadutyulwa kwizihlandlo ezisibhozo kwindawo awayehlala kuyo, etyholwa emva kokuba amagosa anganxibanga yunifomu abolekisa ngegunya elingankqonkqoziyo.
Jongana noZwelonke kumamkeli uMargaret Brennan wenza udliwanondlebe noCameron malunga nemicimbi emininzi, nangona kunjalo xa incoko yatshintshela ekubeni kutheni kufuneka adlulise iindleko ngokuchasene namagosa abandakanyekayo kwesi siganeko, wamisela ukuba usandula ukufumana ingxelo isehlo. Uyichaze le ngxelo njengebalulekileyo kuphando, nangona kunjalo ngokukhawuleza wacacisa ukuba ayisiyiyo yonke into, isiphelo-sayo yonke into.
Kukho olunye uhlalutyo oluthe lwenzeka, kwaye iofisi yethu ayicwangcisi ukwenza isibhengezo kule veki, utshilo uCameron. Siyaqhubeka nokusebenza ngokuzimisela ukujonga ulwazi kwaye sizalise uphando.
Utyhile ukuba uzakudibana ne-FBI kwiintsuku ezisondeleyo ukuvavanya ingxelo, kwaye engayeki ukudideka ukuba unqwenela ukuqhuba uphando olungqongqo, engashiyi nelitye ekumiseleni konke ukuhlanganiswa kweziganeko.
Xa uBrennan wacela ukuba uCameron alindele ukujonga ingxelo, akavumanga ukwenza enye ingxelo.
Nangona kunjalo, uCrump uwuncomile lo msitho njengolwazi olwamkelekileyo, esithi amapolisa ebesoloko ebanga ukuba ingxelo ye-ballistics yayiligama lokugqibela elifunekayo ukusonga uphando. Uye wathi ukuphela okukhawulezileyo kuphando yile nto kufuneka iphiliswe liqela.
Emva kokuba uCrump ebanga ukuba usapho lwenziwe ngamapolisa ngokulibazisa iqhinga, ukulibaziseka kweqhinga, ukulibazisa iqhinga, uBrennan wamcela ukuba angabinanto ukuba ukholelwa ukuba iCandelo lamaPolisa laseLouisville lalilibazisile ngenjongo yophando.
UCrump watsho nje ukuba wayesazi ukuba usapho lukaTaylor aluthembanga. Ubuye wavuselela isimangalo sokuba ingxelo yamapolisa ishiywe ngokucacileyo ngokucacileyo ngeenkcukacha, kwaye watyhola ukuba wenze amabango obuxoki, alinganayo nokushiya naliphi na inqanaba ngaphandle kokunyanzelwa kokungena kwaye echaza ukuba uTaylor akabikho kwingozi.
Kwangoko kunokugqiba udliwanondlebe, uCrump wanikezela ngotshintsho kwimeko kaJacob Blake. Ucacisile ngeengozi ezahluka-hlukeneyo athe uBlake wabethwa zizo ngenxa yokudutyulwa kweziganeko ezisixhenxe kwaphinda kwenziwa lipolisa, njengoko kubonisiwe kwimifanekiso yevidiyo evela kweso siganeko.
Ufumene iingozi ezimanyumnyezi, utshilo uCrump, efaka ukungena kwe-bullet kwi-twine yomqolo, ikholoni, kunye nezintso, kwaye wathi uBlake wayelahlekise ulawulo lwezenzo zakhe zamathumbu.
Uliqokobhe lakhe, utshilo uCrump.
Izigaba: Amazon-Prime Hollywood Umqala
U-angelina jolie kunye no-brother brother
craig ukubuyisa umthetho ngokuqinileyo kwiwebhusayithi
I-doc elungileyo yenet efanelekileyo
ryan serhant brooklyn ekhaya